बेष्ट फाइनान्सको पुस ४ देखि सेयर लिलामीमा आउँदै, कहाँ जाने आवेदन भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » बेष्ट फाइनान्सको पुस ४ देखि सेयर लिलामीमा आउँदै, कहाँ जाने आवेदन भर्न ?
काठमाडौं - पुस ४ गतेदेखि बेष्ट फाइनान्सले २ लाख ९० हजार २३६ कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री गर्दैछ । कम्पनीले संस्थापक समूहको १ लाख ७ हजार ४० कित्ता र सर्वसाधाण समूहको १ लाख ८३ हजार १९६ कूल २ लाख ९० हजार २३६ कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री गर्न लागेको हो । यी सेयरहरुमा न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर आवेदन दिनुपर्नेछ । पुस १२ गते सेयर भर्ने अन्तिम दिन रहेको छ ।
बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, राष्ट्रिय नाचघर जमल काठमाडौंबाट आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी ग्लोबल आइएमई बैंकको वीरगञ्ज, विराटनगर, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढी शाखा कार्यालयबाट पनि भर्न सकिनेछ । हाल यस फाइनान्सको चुक्ता पुँजी २२ करोड १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लिलामीपछि भने बेष्टको चुक्ता पुँजी ३८ करोड ५४ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बेष्टले २ करोड ३५ लाख २७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसअघि जनरल फाइनान्सको नामबाट कारोबार गरेको कम्पनीले असोज २४ गतेबाट बेष्ट फाइनान्सको नामबाट कारोबार सुरु गरेको हो । चुक्ता पुँजी बढाउने अभियानमा रहेको बेष्टले सिनर्जी फाइनान्सलाई एक्वायर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।